musha Horror Varaidzo Nhau 'Evil West' Inobatanidza Rootin, Tootin Six-Shootin uye Madhimoni muOld West
Horror Varaidzo NhauNgoro (firimu)Video Games
yakanyorwa na Trey Hilburn III April 22, 2021
Kana paine mukana wekutamba mutambo wakaiswa mudhara kumadokero. Ini ndiri fuckin ndakatengesa. Senge, zvese zviri mukati. Zvino, kana iwe ukabatanidza zvemashiripiti nemadhimoni muchiitiko chekare chekumadokero, unondiita ndakafa kukodzero, sekutaura. Tarisa Kumusha Kunopindirana uye Kubhururuka Hog Yemusango akabatanidza masimba kutirova nawo Zvakaipa West. Ndiwo mutambo unoita zvese zvataurwa pamusoro.
Njodzi yerima inodya muganhu weAmerica. Semumwe wevamiriri vekupedzisira vepamusoro-chakavanzika vampire-yekuvhima sangano, iwe uri wekupedzisira mutsara pakati pevanhu uye kwakadzika midzi kwakadzika iko zvino kwabuda kubva mumumvuri. Simuka kuti uve weWest West gamba, bvisa vampire kutyisidzira uye ponesa United States!
Zvakaipa West ichasanganisa kutamba kwepfuti, magajeti, uye mhedziso mabhora kurwa kwemadziro. Zvese izvo zvine kugona kutora co-op chiito pane zvaunoda. Pakati penzira, iwe unofanirwa kukwidziridza zvaunowana uye zvigadzirwa zvemagetsi zvese muzita rekugadzira yako dude yakazara badass yakagadzirira kutora pamhomho yemadhimoni uye nemweya unoshamisa tomfoolery.
Imi varume munofungei nezve iyo nzira iyo Zvakaipa West yatungamira? Uri kutarisira kuparadza madhimoni mukare kumadokero? Tiudzei muchikamu chemashoko.
Zvakaipa West yakarongerwa kurova PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X | S, Xbox One uye PC gare gare gore rino. Zvakadaro hapana zuva chairo asi isu tinokuzivisa iwe nekukurumidza sekuziva kwedu.
Ghostbusters nyeredzi Annie Potts ane zvakanaka uye zvakapetwa zvinhu zvekutaura nezvekutarisa Ghostbusters: Mushure mekufa. Tarisa uone apa.
Zvakaipa WestTarisa Imba InoshandaDreamcastXbox